Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Talaado Ah - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Talaado Ah
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Qoreen Wargeysyada Ingariiska Maanta Oo Talaado Ah
Paris St-Germain, Real Madrid iyo Inter Milan ayaa isha ku haya xaalada Jesse Lingard ka hor suuqa xagaaga. 28 jirkaan khadka dhexe ee England iyo Manchester United ayaa qaab amaah ah kula jooga West Ham. (ESPN)
Arsenal ayaa weli isha ku heysa inay lasoo saxiixato 23 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Celtic Odsonne Edouard laakiin waxay tartan kala kulmeysaa kooxda Leicester. (Telegraph)
Manchester United ayaa ka walwalsan inay wadahadal kala gasho Borussia Dortmund saxiixa weeraryahanka reer Norway Erling Braut Haaland, oo 20 jir ah, iyadoo xagaagii la soo dhaafay ku guuldareysatay inay kala xaajooto qiimo jaban ay ku hesho saaxiibkiis Jadon Sancho. (The Athletic)
Inkastoo wadahadaladaasi burbureen, Manchester United ayaan meesha ka saareynin inay u dhaqaaqdo weeraryahanka reer England Sancho oo 21 jir ah xagaagan. (Manchester Evening News)
Wakiilka Erling Braut Haaland, Mino Raiola ayaa sheegay in Borussia Dortmund aysan dooneynin inay iska iibiso weeraryahanka xagaagan. (Daily Star)
Manchester United ayaa dib u soo cusbooneysiisay xiisihii ay u qabtay xiddiga Lazio Sergej Milinkovic-Savic. 26 jirkaan reer Serbia ee khadka dhexe ayaa sidoo kale diirada u saaran kooxaha Real Madrid iyo PSG. (Gazzetta)
Tottenham ayaa qarka u saaran inay u dhaqaaqdo daafaca Bayern Munich Jerome Boateng. 32 jirkaan daafaca dhexe ee Jarmalka ayaa ka tagi doona kooxda weyn ee Bundesliga dhamaadka xilli ciyaareedkaan. (Sky Germany)
Tottenham ayaa mudnaanta siin doonta xoojinta daafaceeda xagaagan laakiin waa inay marka hore iibiyaan ciyaartoy si ay lacag ugu helaan. (Daily Mail)
AC Milan waxaa ka go’an inay heshiis joogto ah la saxiixato 23 jirka daafaca dhexe ee reer England iyo kooxda Chelsea Fikayo Tomori, kaasoo haatan amaah ugu jooga kooxda reer Talyaani. (Corriere dello Sport)
Rajada Chelsea ee saxiixa 22-jirka Goolhaye Gianluigi Donnarumma waxaa sare u qaaday wararka sheegaya in wadahadaladii heshiis kordhinta ee u dhaxeeyay isaga iyo AC Milan ay hakad galeen (Gazzetta dello Sport)
Bayern Munich ayaa xiiseyneysa daafaca reer Spain Lucas Vazquez, kaasoo laga yaabo inuusan markale u ciyaarin Real Madrid. Dhaawaca jilibka ee 29-sano jirkaan ayaa laga yaabaa inuu garoomada ka maqnaado illaa dhamaadka xilli ciyaareedka, markaasoo qandaraaskiisa uu dhacayo. (Marca)
Juventus ayaa si aad ah u doonaysa saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Barcelona iyo xulka qaranka France ee Ousmane Dembele oo 23 jir ah marka uu heshiiskiisu dhici doono 2022. (Mundo Deportivo)
Tababarihii hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson ayaa sheegay in ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe Owen Hargreaves uu ahaa saxiixiisii ​​ugu xumaa intii uu joogay kooxda. (Daily Star)